Fanafihana Tsenambarotra Tao Nairobi Nanome Aingam-Panahy Fitaovana Vonjy Taitra An-Tserasera Roa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2013 23:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Swahili, Català, English
Vakio ihany koa: Ahoana ny Nivoahan'ny Fanafihana Tsenambarotra tao Nairobi Tamin'ny Tambajotra Sosialy sy Mpanoratra Global Voices Mahatsiaro Ireo Namana Novonoina Tamin'ny Fanafihana Tsenam-barotra Tao Nairobi [mg].
Tamin'ny 21 Septambra 2013, Nisy vondrona mpikatroka ahiana ho al-Shabab nanakorontana ny tsenambarotra Westgate tao Nairobi, renivohitr'i Kenya, izay nahafatesana olona 61 farafahakeliny, enina mpiasan'ny fiambenana sy naharatrana lehilahy, vehivavy ary ankizy tsy manan-tsiny an-jatony.
Taorian'io fanafihana mampihoron-koditra io dia namoaka fitaovana ilaina amin'ny vonjy taitra roa ny Ushahidi. Orinasa tsy mitady tombombarotra miompana amin'ny resaka teknolojia ny Ushahidi amin'ny fampivelarana rindrambaiko malalaka loharano sy maimaipoana amin'ny fanangonam-baovao, topimaso ary ny fifarimbonana an-tsarintany.
“Ushahidi”, izay midika hoe “vavolombelona” amin'ny fiteny Swahili, dia tranonkala niainga tamin'ny fanaovana tatitra an-tsarintany ny herisetra tao Kenya taorian'ny fifidianana niteraka gidragidra tamin'ny fanombohan'ny taona 2008.
Ny fampihatra Ping dia “fitaova-pamaliana antso” (fanamarinana raha tsy maninona) maro-zotra ho an'ny vondrona. Hanampy ny fianakaviana, ny namana ary ny orinasa hifanamarinana amin'ny fomba haingana ny fahavelomana ny fitaovana:
Misy olana azo tsapai-tanana isaky ny misy voina mitranga, tsy eto Kenya ihany, fa na aiza na aiza. Te-hahalala haingana izay mety manjo ny ao aminy ny vondrona madinika, fianakaviana ary ny orinasa. Mila mi-“ping” ny hafa izy raha te-hahafantatra fa tsy misy maninona ny ao aminy. Misy zavatra ilaina ho tena tsotra dia tsotra tokoa, tsy mila fieritreretana be. Efa nampiasa zavatra sasantsasany eto amin'ity sehatra ity ny olona taloha, natao tamin'ny mùpampiasa finday avolenta [smartphone] ny tsara indrindra tahaka ny “tsy maninona aho”, saingy ilaintsika ny hampety azy na dia amin'ny finday tsotra indrindra aza. Ny tanjonay dia ny hananan'ny rehetra azy ity ka samy afa-mampiasa azy daholo.
Ny Fampihatra Ping – fitaova-panamarina-pahavelomana raha misy vonjy taitra. Loharanon-tsary : blaogy Ushahidi.
Toy izao ny fomba fiasan'ny Ping:
Manangana lisitr'olona (fianakaviana, fikambanana) ianao, ary dia samy mampiditra lisitry ny ifandraisana izay akaiky azy ihany koa ny tsirairay (vady, iray efitrano, sipa, sns).
Raha misy voina mitranga, mandefa hafatra ho an'ny rehetra ianao fa te-hamantatra. Mandefa hafatra mahazaka tarehintsoratra 120 izay ahitana soratra manao hoe “tsy maninona ve ianao?” any amin'ny farany hatrany ny mpandrindra (admin).
Mandeha sms sy imailaka iny (afa-manampy fantsona maro hafa ihany koa aoriandriana ao).
Mandeha in-telo isaky ny 5 minitra ny hafatra. Raha misy ny valiny, dia azo heverina ho tsy maninona iny olona iny. Raha tsy misy valiny, dia misy hafatra telo hafa alefa any amin'ny olona hafa ananany fifandraisana.
Mameno ny valiny amin'ny faritra telo isika: izay namaly (voamarina), tsy namaly, mampanahy.
Ny hafatra rehetra izay mivaly avy any amin'ny hafa ao amin'io vondrona io dia voatahiry ao amin'ny harona fitoeera-tsoratra, izay azon'ny mpandrindra ametrahana naoty raha ilainy izany.
Misy ny fitaovana hafa, dia ny Blood Donation Kenya, [Fanomezan-dra Kenya] izay sarintany ifandrimbonan'ny ivotoerana mpanangon-dra rehetra. Mampifandray ny toera-panangonana amin'ny te-hanolotra fanomezana, na fitaova-pitsaboana na mpiasan'ny fitsaboana ilay fitaovana.
Pikantsarin'ny sarintany ifandrimbonana mampiseho ny toerana fanomezan-dra ao Kenya. Loharanon-tsary: blaogy Ushahidi.
Manazava ny lojikan'ny ilàna ny sarintany i Erik Hersmann:
Iray amin'ny olona mampiaiky indrindra amin'ny fandraisana anjara raha misy vonjy taitra rehetra i Philip Ogola avy ao amin'ny Vokovoko Mena Kenya. Izy no tonga voalhoany eo amin'ny toerana ary manana ny fanampim-baovao farany, saingy maro loatra ny tokony atao ka [moa] ho vitan'ny olona iray. Ankehitriny nahavita zavatra mampiaiky volana ny Vokovokomena Kenyana, saingy manana olana ry zareo fa mbola maro ny ao amin-dry zareo no amin'ny taratasy sy penina hatrany (ary misy ny vondrona hafa ao an-toerana no miasa amin'ny rafitra fanangonana tahirinkevitra no mamadika izany ho nomerika fa tsy mametraka ny tena anaran'ilay olona ao amin'ny aterineto, ampandehanin'i Nivi ao amin'ny eLimu) . Ny olana hafa dia rehefa misy ny hopitaly no lany ny sokajin-dra sasantsasany ao aminy, nefa be dia be ny sokajin-dra hafa, rehefa tonga maro hanome ra ny vahoaka kenyana.
Ahoana ny handrindrana izany tsara kokoa, mba tsy hiveri-maina any amin'ny toerana sasany ny olona ary mba hahalalany hoe aiza no alehany mila ny sokajin-dra ananany?
Nametraka sarintany ifandrimbonana izahay hametrahana amin'ny sarintany ny ivotoerana mpanangon-dra rehetra misy eto amintsika, mba hifandraisan'ireo toerana ireo amin'izay te-hanampy ao amin'ny BloodDonationKenya.Crowdmap.com na amin'ny fanomezan-dra izany, na fanolorana fitaova-pitsaboana na fanolora-tenan'ny mpiasan'ny fahasalamana.